"Chlorophyllipt": प्रयोग र उत्पादन विवरण लागि निर्देशन। "Hlorofilliptom" एनजाइना कसरी कुल्ला गर्नु गर्न
कारण यसको संविधान सक्रिय सामाग्री गर्न दबाइ को नाम - chlorophyll एक र ख को निकाल्छ। यी यौगिकों मसलाको देखि तयार छन्। सुन्दर दक्षिणी अक्षांश यो बोट बाट गरे, Broths र आवश्यक तेल लामो माथिल्लो श्वसन पर्चा को संक्रामक रोगहरु को उपचार को लागि प्रयोग गरिएको छ।
दबाइ को प्रभावकारिता
तुरुन्तै याद दबाइ "Chlorophillipt", कार्य को एक विस्तृत स्पेक्ट्रम छ जो धेरै एन्टिबायोटिक, विपरीत कुनै यस्तो polyvalent रोगाणुरोधी गतिविधि छ भन्ने तथ्यलाई छ। यसलाई जो रोगजनकों को एक ठूलो सेना बनाउन र विभिन्न गम्भीर रोग को कारण हो, मुख्य रूप staphylococci नष्ट गर्न सक्षम छ, माथिल्लो श्वसन तरिका प्रभावित रोगहरु को सरुवा प्रकृतिको सबैभन्दा।
न त प्रकारको staphylococci को रोगाणुरोधी कार्य "Chlorophillipt" तयारी प्रतिरोध गर्न सक्दैन। प्रयोगको लागि निर्देशन संक्रमण गर्न विरोध नै शक्ति संग दबाइ को कि फरक औषधिको खुराक प्रकारका देखाउँछ। स्प्रे र र एक ट्याबलेट, र समाधान (रक्सी र तेल) सफलतापूर्वक sinusitis, rhinitis, मुखशोथ, pharyngitis, गलसुआशोथ र एनजाइना को मामला मा आफूलाई देखाउँछन्।
स्कोप र प्रयोगको लागि सङ्केत गर्छ
समाधान (र रक्सी, र तेल) थप व्यापक प्रयोग गरिन्छ, जबकि, "Chlorophillipt" मुख र घाँटी को संक्रमण को उपचार को लागि विशेष इरादा ट्याब्लेटको प्रयोग गरेर।
यसरी तिनीहरू को उपचार प्रभावकारी छन्:
- महिला लैंगिक रोगहरु (topically syringing लागू);
- गैस्ट्रिक अल्सर, ब्रोंकाइटिस (अन्य लागूपदार्थको संग संयोजन मा orally प्रबन्ध);
- सेप्टिक घाउ वा बल्न (topically प्रयोग);
- एंटीबायोटिक प्रतिरोधी वनस्पतिहरूको कारण जुन निमोनिया र sepsis, (intravenously प्रबन्ध)।
तर अझै पनि सबै भन्दा सामान्यतः एक कुल्ला रूपमा घाँटी लागि हालतमा प्रयोग "Chlorophyllipt"। यो रक्सी पिउने समाधान पनि peritonitis र empyema संग केहि मानव शरीर cavities धोइदिनुभएर लागि सर्जरी मा प्रयोग गरिन्छ। यो sinuses खाली लागि ENT डाक्टर मा प्रयोग गरिन्छ।
र यो अवस्था को सम्पूर्ण सूची दबाइ चिकित्सा प्रयोग गरिन्छ लागि "Chlorophyllipt" छ। प्रयोगको लागि निर्देशन विस्तार मा दबाइ को प्रशासन को लागि सबै प्रमाण वर्णन गर्दछ। गरौं, र हामी राम्ररी उपकरण प्रभावकारी हुने केही रोगहरु छलफल गर्नेछन्।
ग्रीवा क्षरण को उपचार
रक्सी समाधान - जब यो रोग दबाइ औषधिको खुराक फारम "Chlorophyllipt" प्रयोग गर्नुपर्छ। लागूपदार्थ प्रयोग गर्न तुरुन्तै पूर्व कि निर्देशन टिप्पणीहरू ध्यान ड्राई swab योनी को श्लेम लाग्एको झिल्ली को सबै Folds को सतह भोकमरी हुनुपर्छ र यसलाई भाग cervix मा स्थित छ। त्यसपछि खकार हटाउन पर्छ। यो उद्देश्य लागि, ग्रीवा नहर सोडियम बिकारबोनिट समाधान (5%) मा डूबा swab सखाप हुनुपर्छ, र फेरि भोकमरी। अर्को, महिला को आन्तरिक जनन को क्षेत्र "Chlorophyllipt" समाधान चिकनाना गर्न आवश्यक छ। को प्रयोग तेल एजेन्ट विकल्प भने, यसको एकाग्रता 2% हुनुपर्छ, यदि एक रक्सी - 1%। तयारीको प्रक्रिया सबै क्षरण पछि, tampon एक जबकि लागि बायाँ गर्नुपर्छ (15-20 मिनेट पर्याप्त छ) को cervix मा एक्लै।
एक चिकित्सकीय प्रक्रिया को प्रभावकारिता विस्तार गर्ने 10 दिनको लागि दैनिक प्रदर्शन गर्नुपर्छ। रोगी त स्वतन्त्र कम्तिमा2हप्ता syringing प्रक्रिया पूरा गर्न छ। यो अवधिमा हरेक दिन तपाईं प्रक्रिया को लागि तरल पदार्थ को ताजा ब्याच तयार गर्न आवश्यक छ। यो जोडी गर्नुपर्छ 1 पानी लीटर को रक्सी "Chlorophillipt" (1%) को एक चमचा (25 एमएल) समाधान छ। प्रत्येक douching योनी swab पछि दबाइ संग राखिएको हुनुपर्छ। यसको बारेमा 12 घण्टा पछि हटाइनु पर्छ। उपचार क्षरण बेला epithelium पूर्णतया पुनःस्थापित गरिएको छ भने, यो उपचार को पाठ्यक्रम बारम्बार आवश्यक छ।
प्रयोग "Chlorophyllipt" छोराछोरीको लागि उपचार
दबाइ एकदम अक्सर बच्चाहरु नियुक्त गरिएको छ - एक staph संक्रमण कारण रोग को घटना मा। अक्सर रक्सी समाधान मा समावेश गरिएको छ किरा को संरचना नवजात शिशुहरु लागि। उदाहरणका लागि, नाइटो "hlorofilliptom" को उपचार यदि Zelenka लागू गर्न कुनै संभावना छ बनाएको छ। साथै, suppuration वा दाना हुन्छ जो छाला, को disinfection लागि प्रयोग तयारी। समाधान "Chlorophillipt" यस्तो निमोनिया वा सेप्टिक अवस्था रूपमा जटिलताहरू रोक्न सक्ने क्षमता पनि छ। विशिष्ट सिफारिसहरू र औषधिको खुराक को बाल विशेषज्ञ अनुरोध गर्नुपर्छ।
धेरै विरामीहरु, रुचि राख्नुहुन्छ शरीर चिकित्सा "Chlorophyllipt" हानि गर्न सक्छ। दबाइ को प्रयोगको लागि निर्देशनहरूको प्रयोग गरेर अघि यो घटक मा निहित ती शरीर गरेको संवेदनशीलता निर्धारण गर्न आवश्यक छ कि यस्तो चेतावनी दिन्छ। यो पानी (एक चमचा) को 25 एमएल संग समाधान को 25 "Chlorophillipt" घटेको जोडिएको हुनुपर्छ र रोगी गर्न मिश्रण पिउन अनुमति दिन्छ। 6-8 घण्टा पछि मुख मा laryngeal edema वा mucosa को रूप मा एक एलर्जी प्रतिक्रिया को संकेत को अभाव मा, दबाइ उपचारको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। आवेदन विधि चयन गर्न सकिँदैन कि त: मौखिक, नसों, सामयिक वा Enemas रूपमा।
तपाईं औषधी प्रयोग "Chlorophyllipt" को पृष्ठभूमि विरुद्ध नकारात्मक प्रभाव अनुभव हुन सक्छ। दबाइ को प्रयोगको लागि निर्देशन यस नाक, घाँटी को श्लेम लाग्एको झिल्ली, र सतह अनुहारहरू को सुनिंनु छ - मुख्य र सबै भन्दा गम्भीर पक्ष प्रभाव हुन सक्छ भन्ने रिपोर्ट। यो आधारित धन को "Chlorophyllipt" को प्रयोग को लागि मात्र विद्यमान contraindication - दबाइ, विशेष गरी chlorophyll मसलाको अर्क एक अतिसंवेदनशीलता।
दबाइ एक एलर्जी प्रतिक्रिया रूपमा - एक दुर्लभ घटना, दबाइ एक निर्धारण बिना कुनै पनि नजिकका फार्मेसी मा खरिद गर्न सकिन्छ। अर्को, यो दवादारू "Chlorophillipt" को औषधिको खुराक प्रकारका विशेष आवेदन विचार गर्नुहोस्।
topically र orally चिकित्सा प्रयोग दबाइ को यो फारम। को उपचार मा प्रयोग समाधान:
- घाउ fester;
- महिला लैंगिक क्षेत्र (बाह्य शरीर) मा भडकाऊ प्रक्रिया;
- ग्रहणी अल्सर वा पेट;
- फेफडों को सुनिंनु;
- पाचन पर्चा रोगहरु (staphylococcal संक्रमण कारण)।
प्रयोग गरिन्छ चिकित्सा, को मुख्य क्षेत्रहरु, यो निरूपण अर्थ "Chlorophyllipt" (निर्देशन पुष्टि) - जठरान्त्र विज्ञान र gynecology। लागि एनजाइना को उपचार यस्तो समाधान प्रयोग गरिएको छैन। केही ENT डाक्टर गलसुआशोथ को उपचार को लागि एक उपयुक्त माध्यम यो वास्तवमा विवाद र यसैले छलफल हुनत समाधान "Chlorophyllipt" (तेल) छ। को घाँटी लागि निर्देशन लागू यसलाई तैपनि सल्लाह गर्दैन।
औषधि "Chlorophyllipt" एनजाइना अक्सर नियुक्त। यो रक्सी पिउने समाधान rinsing, streptococci कारण रोग सामना गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका को लागि एक तरल थपिएको थियो। को दवादारू मामला मा एक प्रभावकारी washout पीप प्लग प्रदान lacunar एनजाइना र disinfection श्लेम लाग्एको झिल्ली Folds र cavities गलसुए।
को श्लेम लाग्एको झिल्ली हानि गर्न रूपमा कसरी, "hlorofilliptom 'घाँटी कुल्ला गर्न? एक डाक्टर को सिफारिस लागि प्रयोग यदि रक्सी समाधान, को औषधिको खुराक को नुस्खा मा लागि देख्यो गर्नुपर्छ। प्रत्येक व्यक्ति मामला मा पानी मा दबाइ dilution को अनुपात। सही औषधिको खुराक जानकारी पनि हुन निर्देशन फेला गर्न सक्नुहुन्छ। तथापि, कसरी rinsing, एक सानो लागि समाधान तयार गर्न सजग हुन। यसलाई अन्यथा, उपचार को सट्टा स्वास्थ्य हानि गर्न सक्छ, पत्ता लगाउन आवश्यक छ, र प्रक्रिया प्रदर्शन गर्न अक्सर कस्तो छ।
ट्याब्लेटको "Chlorophillipt" - तयारीको को रक्सी समाधान lacunar एनजाइना संग खोकी को निपटान लागि इष्टतम भेद pharyngitis मा, gargling त्यसपछि लागि सबै भन्दा राम्रो माध्यम मानिन्छ भने। पुस्तिका पुष्टि एक दबाइ को ठोस फारम अर्थ पुरानो रोग मा mucosal परिवर्तन को मामला मा एक राम्रो प्रभाव। "Chlorophyllipt" लागूपदार्थको ट्याब्लेटको को मुख्य लाभ - प्रयोग मा सजिलो र लामो जोखिम समय।
र ठोस रूप मा एक दबाइ कि दुखेको घाँटी को छुटकारा प्राप्त गर्न सक्छन्? निस्सन्देह, हो! ट्याब्लेटको "Chlorophillipt" यो मामला मा सञ्चालन। तर सबै भन्दा राम्रो विकल्प - आफ्नो स्वागत संग संयोजन गर्न gargling, जसको लागि, पहिले भने गरिएको छ रूपमा, दबाइ को रक्सी पिउने समाधान छ। तरल रूप दबाइहरु निर्मल पीप को गुहा र ठोस - - हुनेछ भडकाऊ प्रभाव यसरी यो डबल प्रभाव हासिल गर्न सम्भव छ।
स्प्रे र इंजेक्शन
एक स्प्रे चिकित्सा "Chlorophyllipt" सर्दी लागि घाँटी को सिंचाई को लागि प्रयोग गरिन्छ। उहाँले coughing र संक्रामक प्रकृति को प्रक्रिया को राहत मार्फत कार्य। इंजेक्शन लागि समाधान शायद प्रयोग गरिन्छ। आफ्नो नियुक्ति एक अनुभवी विशेषज्ञ बताउन विस्तार हुन सक्छ।
"Monosan": प्रयोगको लागि निर्देशन वास्तविक समकक्षों
शरीरको लागि एंटीबायोटिक्सको फाइदाहरू र हानि। स्वास्थ्यलाई कसरी हानिकारक बिना एंटीबायोटिक्स लिनुहोस्: विशेषताहरू र सिफारिशहरू
भिजुअल कला मा उपकरण 'ड्राई ब्रश'
फोटो मा हिज्जे
बिस्कुट कसरी बनाउने? आधारभूत नग्नताहरू
थर्मल जला: लक्षण, पहिलो सहायता
आलु "Sokolnicheskaya": वर्णन, रचना, प्रकार, निर्माता र समीक्षा
हैंडबैग, crocheted - सामान को दुनिया मा एक हाइलाइट